RASMI: Liverpool Vs Man City- Guardiola & Jurgen Klopp Oo Xili Ciyaareedka Cusub Ku Furan Doona Koobka Community Shield. - Gool24.Net
Kadib markii ay Manchester City ku guulaysatay koobka FA Cupka waxaa ka soo dhex baxay kulan xiiso badan oo ah kulanka furitaanka xili ciyaareedka cusub ee Community Shield.
Manchester City iyo Liverpool ayaa Wembley Stadium ku furan doona xili ciyaareedka cusub ee 2019/2020 iyaga oo iskaga hor iman doona finalka koobka Community Shield.
Haddii ay Watford ku guulaysan lahayd koobka FA Cupka waxaa Wembley Stadium koobka Community Shield kuwada ciyaari lahaa Man City iyo Watford laakiin xaalada ayaa hadda noqotay mid ka xiiso badan.
Maadaama oo ay Manchester City ku soo wada guulaysatay koobabka Premier league iyo FA Cupka oo uu ka soo dhex baxo Community Shield, waxay taasi keentay in Liverpool ay boos u hesho finalka Community Shield.
Liverpool oo kaalinta labaad kaga dhamaysatay Premier League ayaa xaq u yeelatay in ay ka soo muuato finalka Community Shield maadaama oo ay Man City noqotay kooxda wada hanatay labada koob ee Premier League iyo FA Cupka ee ay kooxaha ku guulaystaa koobkan wada ciyaari lahaayeen.
In kulanka Community Shield ay wada ciyaari doonaan Jurgen Klopp iyo Pep Guardiola waxa uu sii hurin doonaa xifiltanka cusub ee Man City iyo Liverpool u soo socday xili ciyaareedkan.
Xili ciyaareed kasta bilawgiisa waxaa lagu furaa finalka Community Shield oo lagu ciyaaro Wembley Stadium kaas oo ay bilawgii xili ciyaareedkan Man City ku soo guulaysatay.
Waxaana finalka Community Shield lagu ogaadaa awooda kooxaha loo saadaaliyo koobka Premier League ee xili ciyaareedka cusub waana goob uu ka bilaami doono dagaalka Man City iyo Liverpool ee 2019/2020.
Liverpool ayaa koobka Community Shield ka qayb gali doonta markii ugu horaysay tan iyo sanadkii 2006 kii markaas oo ay Chelsea guul 2-1 ah kaga gaadheen garoonka Millennium Stadium ee magalaada Cardiff.
Kulanka finalka Community Shield ayaa Wembley Stadium ka dhici doona horaanta bisha August oo ku beegan maalmo kooban ka hor furitaanka xili ciyaareedka cusub ee Premier League.